FICUS ABIDJAN: SHARAX, SAWIR, DARYEEL GURIGA - FICUS
Ficus Abidjan (Ficus Abidjan) - mid ka mid ah dhirta ugu caansan caadi ahaan, kaas oo muddo dheer ku guuleystay jacaylka bannaanka.
Waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan guriga iyo xafiiskaba, qurxinta qolka iyo siinaya wax yar oo qalaad.
Warshadkan ayaa ku farxay milkiilayaasha sanadka oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida si habboon u daryeesho isaga.
Ficus Abidjan waa warshad caddayn leh oo leh qaab ballaaran oo ballaaran oo dhererkiisu gaari karo illaa 1.5 mitir. Waxay leedahay cufan cufan, dhalaalaya oo cilad ah oo qaabka ovalaha ah iyo calaamad u taagan oo koraan ilaa 25 cm oo dherer ah iyo 18 cm ballaaran.
Caleemaha Abidjan waa cagaar madow oo leh xidid dhexe oo iftiin ah. Qeybta hoose ee caleemaha waa cagaar, mararka qaarkood si habsami ah u rogaa burgundy. Dabeecadaha - casaan ama burgundy.
Abidjan waa noocyo kala duwan oo caag ah, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka, sameynta dhirta, cudurada, noocyada ficus-ku-fiiqda.
Abidjan ayaa ah waddanka ugu caansan Asia. Tani waxay ka muuqataa "dabiiciga" ee warshadda, oo jecel qoraxda oo ka cabsanaya qoraallada. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo dabiiciga kulaylaha, dhirta ayaa si fiican u bartay si ay ugu noolaato guryaha casriga ah.
Ma taqaanaa? Ficus Abidjan waa mid ka mid ah 900 nooc oo wakiillo ka mid ah qoyska Mulberry. Wuxuu magaciisa ku leeyahay magaalada oo ku yaala gobolka Afrika ee Côte d'Ivoire.
Xeerarka iibsashada ficus
Warshadda waa in laga iibsadaa oo kaliya kuwa iibiya aamminsan kuwaas oo haysta shahaadooyin alaabtooda. Waa inaad doorataa seedling xooggan oo leh nidaam xidideysan oo aan lahayn wax cillad ah ama cudur. Ma aha lagama maarmaan in la iibsado nuqul aad u weyn, way adkaan doontaa in la qabsado xaaladaha cusub.
Doorashada seedling, wax yar u rux. Haddii ugu yaraan laba caleemo oo hoos u dhaco, waxaa fiican inaadan soo iibsan nuqulkan. Sidoo kale fiiri godka dufanka. Rootyadu waxay muujinayaan cudurkooda.
Intaa waxaa dheer, iibsashada ficus cusub wuxuu u fiican yahay xilliga kuleylka, tan iyo xilliga qaboobaha ama dayrta waxay adkaan doontaa in la isku xiro.
Xaggee si loo dhigo ficus ka dib iibsashada: xaaladaha ugu fiican
Inkasta oo aan qabsoomeynin geedka, waa lagama maarmaan in la siiyo xaalado wanaagsan oo horumarineed. Nabadgelyadiisa iyo muuqaalkiisa caafimaad ayaa ku xirnaan doona.
Baro sida loo boodo ficus, sida loo soo qaado ciidda, sida loo daweeyo ficus, sida loo faafiyo ficuska.
Ficus waa geedka iftiin-jecel, sidaas darteed waa inaad ku dhejisaa xayawaanka daaqada oo si fiican u iftiimaya iyada oo aan qorraxdu si toos ah u qotonin. Waxaa fiican in iftiinku uu yar yahay. Iyada oo qorraxdu ka badan tahay, waxaad daaqada ku dari kartaa daaqad khafiif ah.
Haddii aad dhirta geedka meel dhigto, ma hubi inaysan baabi'in doonin, laakiin koritaankeedu si weyn ayuu u gaabin doonaa.
Ficus wuxuu jecel yahay kulaylka, sidaas darteed xagaaga qolka meesha uu ku korayo, heerkulku waa in uu ahaado 1 + 8-24 digrii. Xilliga jiilaalka, waxay noqon kartaa wax yar oo ka hooseeya - min +16 ilaa +18 digrii. Ficus xagaaga waxaa laga saari karaa balakoonka bariga ama galbeedka, marka la dhigo warshad koonfurta ah, waxaa lagama maarmaan ah in Ficus aan loo haynin habka loogu talagalay mashruucyada, haddii kale caleemaha ayaa bilaabi doona inay ku daboolaan dhibco mug leh oo hoos u dhacaan. Intaa waxaa dheer, waxaa lagugula talinayaa inaanad meel kale u guurin.
Geedku wuxuu jecel yahay qoyaan, sidaas darteed waxaad u baahan tahay in aad marar badan ku buufiso oo aad tirtirto caleemaha qoryaha qoyan. Gaar ahaan qoyaan yar (guga dambe iyo xagaaga). Qiyaastii hal mar ayaa waxaa habboon in la diyaariyo qubeys diirran, isaga oo hore u xiray dhulka.
Waa muhiim! Xaaladaha murugada leh, tusaale ahaan, marka la beddelo xaaladaha korniinka, dhirta ayaa laga yaabaa inay bilaabaan inay dhicin caleenta. Ha walwalin, kadib markii ficus-ku-soo-kabashada la soo celin doono.
Sida loo daryeelo ficus Abidjan guriga
Kaligeed, dhirta waa mid aan qabyo ahayn oo adag. Daryeelidda waxay ka kooban tahay keliya waraabinta muddada ah, quudinta guga iyo xilliga guga iyo gooyo. Bal aynu eegno dhammaan hawlahaan si faahfaahsan.
Sida dhirta kale ee kulaylaha, Abidjan waxay jeceshahay biyaha. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u waraabiso, oo aan u oggolaanin dhulku inuu qalalo. Wixii waraabin ah waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho biyo kala go'ay, biyo kulul ama biyo roob leh heerkulka qolka. Nidaamka waraabinta xagaaga - mar ama laba jeer toddobaadkii. Xilliga jiilaalka, waad yareyn kartaa biyaha. Biyaha xad-dhaafka ahi waa waxyeello geedka, sababtoo ah xididdadiisa waxay bilaabi kartaa in la baro. Haddii tani dhacdo, ficus waa in laga saaraa ciidda, ka saar qaybaha waxyeellada ee xididdada, siin dhirta waxoogaa qallalan, nadiifiso xididada iyo dhirta ubaxa gogol cusub.
Waa sahlan tahay in la ogaado in Abidjan u baahan tahay waraabinta - waxaad u baahan tahay inaad dhulka ku hubiso dherer qiyaastii 3 cm iyo haddii uu qoyan yahay, ka dibna uma baahnid in aad biyo ku shubto. Marka laga reebo in si toos ah loo waraabiyo ciidda, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo buufiyo caleemaha ka dhalada buufinta iyo iyaga lakulanka leh qashin qoyan.
Si ay dhirta u noqoto mid xoog leh oo caafimaad leh, ha ilaawin quudinta. Waxaa la soo saaraa 1-2 jeer bishiiba xilliga kulaylka (laga bilaabo guga ilaa dayrta) leh Bacriminta guud. Waxaad bedeli kartaa bani'aadamka organic iyo macdanta. Waxaad ka iibsan kartaa dhar noocaas oo kale ah dukaamada ubaxyada oo isticmaalaya sida ku qoran tilmaamaha xirmada.
Soo ogow sababta aad u baahan tahay iyo saameynta ay ku leedahay potash, phosphate, Bacriminta nitrogen.
Xaaladaha wanaagsan ee wanaagsan iyo heerka iftiinka wanaagsan, Ficus Abidjan ayaa si dhakhso ah u koraaya - ilaa nus mitir sanadkiiba. Si aad uga fogaato iskuxirka xad-dhaafka ah, waxaad u baahan tahay inaad isku xoqdo.
Si arrintan loo sameeyo, asalka ugu muhiimsan waa qallafsan yahay qiyaas ahaan 20 cm, iyo dhinaca dambe (10 cm dheer) ayaa la gooyaa. Sidan oo kale taajka quruxda badan ayaa la sameeyaa. Guntinta waa in la sameeyaa xilliga gu'ga, iyadoo la isticmaalayo qalab nadiif ah.
Waxaa jira dhacdooyin bilaabaya laanta sida dadka waaweyn. Tani waxay sidoo kale u baahan tahay in la tixgeliyo marka la qorayo.
Video: qaabeynta ficus
Ma taqaanaa? Gobollada koonfureed inta badan waa qaraabada dhow ee ficus waa geed ama geed berde ah. Waxay ku kori kartaa xaaladaha ugu haboon. Tusaale ahaan, rugta caafimaadka ee magaalada Sochi, 2 buundaa oo waaweyn waxay ku koraan derbiga dhagaxa.
Waxaa fiican in dib loo dhigo dhirta dheri joogto ah ka dib karantiin - 2-3 toddobaad ka dib iibsashada. Ficus Abidjan wuxuu jecel yahay dhul bacrin ah oo leh kiimiko dhexdhexaad ah. Ciidda geedo waa inay noqdaan kuwo jilicsan, dabacsan, oo si fiican u buuxa oksijiin.
Tan iyo ficus aad u dhakhso badan u koraan, waxay u baahan kartaa in lagu duubo dherer ballaaran oo ku saabsan 2-3 jeer oo kasta. Waa muhiim inaad tan si taxadar leh u sameyso si aadan u waxyeeleynin nidaamka xididka. Dhirta yaryar waa in la soo celiyaa sannadkiiba.
Wareegidda ilaa hoose ee dheriga ayaa lagu shubay lakabka dufanka oo ka kooban quruurux ganaax, dhagaxyo ama dhoobo. Tayo ee carrada waa isku dhafka isku dhafka ah ee cawska iyo dhulka iyo webiga. Waxa kale oo aad iibsan kartaa dhul khaas ah oo ku yaalla dukaamada ubaxa. Geedka lagama maarmaanka u baahan yahay si fiican loo waraabiyo.
Sidee ficus u dhufanayaa?
Ficus Abidjan waxaa lagu faafin karaa labo siyaabood:
Si aad u hesho goynta buuxda, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo stem apical ah ee geedka, ku rid biyo iyo, sugto xididada si ay u muuqdaan, ku beeri dheriga. Ama, isla markiiba dhulka dhulka ku daboolan filim si loo abuuro saameyn koronto ah. Waxa kale oo aad gooyaa karaa xididada kiniiniga peat.
Si aad ugu daadejiso musqusha, waxaad u baahan tahay inaad gooyso godka saddex meelood oo saddexaad ah iyo meel qanjaruufo ah oo qallooci ah oo jilicsan si meesha looga saaro si aysan u korin. Ku dhaji meeshan leh dhuxul qoyan iyo polyetylen. Marka xididdadu ay jajabaan marsada, asliga ah waa la gooyaa oo lagu beeray dhar gooni ah.
Ma taqaanaa? Aabayaasha faraha badan ee guriga ficus ah waa fengus Bengal - dhirta bukaanka sii kordhaya ee jungle of India. Dhererka caleemaha waxay gaareen mitir, iyo dherer - 30 mitir. Waad ku mahadsan tahay laanteeda qotodheer, taajka geed oo keliya ayaa dabooli kara hadhkiisa dhul ay ka kooban tahay 300 mitir oo laba jibbaaran.
Video: guntinta ficus
Baro sida loo daryeelo ficus, Benjamin ficus, microcarp.
Ficus waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco dhibaatooyinka soo socda:
Caleemaha Jaalaha ah. Tan waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay xad-dhaaf ama biyo la'aan. Hubi qoyaanka ciidda kahor intaadan waraabin.
Caleemo qallalan. Waxaa suurtogal ah in la isku xiro ama la'aanta bacarimid carrada.
Talooyinka cagaaran iyo kuwa cagaaran. Biyaha aan ku filnayn iyo miir ama heerkulka sare ee qolka.
Macmacaanka macaanka. Cudurka fungal wuxuu u bilaabmaa sida ubaxyada cad ee caleemaha, oo markaa markaa ka dib muuqata. Waa in lagu daaweeyaa fungicides.
Caarada caarada Cayayaanka ayaa u muuqda marka ay jirto qoyaan hawo oo aan ku filnayn oo ay ku degan yihiin caleemaha iyo afkoda qaabka dhibcaha yaryar oo fudud, taas oo markaa noqoto huruud. Sida qiyaas ka hortag ah, ku buufin caleemaha biyo saabuun leh.
Shchitovka. Dibadda, waxay u muuqataa dhibco brownish on caleemaha, iyo ka dibna caleemaha u engegay iyo dayrta. Goynta caleemaha xalalka boodhka ah iyo dhajinta xalka Actellic ayaa kaa caawin doonta.
Xaruunta. Waa lagama maarmaan in la beerista dhirta. Dheriga iyo carrada cusub ayaa horay loo nadiifiyey.
Ficus Abidjan waa doorasho weyn oo loogu talagalay ninkii beerta ka shaqaynayay oo leh khibrad kasta. Aragga muuqaalka leh, daryeelka aan habooneyn iyo kobaca degdegga ah ayaa ah faa'iidooyinka aan shaki lahayn. Under shuruudo wanaagsan, dhirta waxay ku noolaan kartaa ilaa 50 sano. Iyo marar dhif ah, xitaa bloom leh ubax yar yar.
Sida loo daryeelo ficus Abidjan: faallooyin
Markii hore, ma jirin wax caynkaas ah, laakiin hadda isla markiiba 2 god ayaa bilaabay inuu isku laabo, midka sare, midka kale ee hoose ee hoose ... Uma maleynayo in tani ay tahay habka ay noqon doonto, dhammaan caleemaha kale waa ku dhowaad isku dhow. Oo waxay u egtahay in ay joojiso sii kordhaya, caleemaha waa la kicin, inkastoo ay tahay inay iftiin ku filan. Ma fahmin dabeecaddiisa. : (Waa maxay daaqadiisu waa inuu ku istaago? Qorraxda, ama dhinaca bari?
Iyo sidee ayaad u maleyneysaa inay tahay? :) Caleemaha looma dhufanayo, way qallalan yihiin, tani waa caadi. Haddii aadan rumaysan waxa laguu sheego golaha - maxaa u codsanaya?
romanti-ca, si aad u dhejisid dhererka dheriga aad u baahan tahay inaad eegto xayawaankaaga. Haddii ay suurtagal tahay, sawirkiisa ku dhaji. Isku dar ah ciidda oo ku saleysan dhul ama dhul wareeg ah, waxaad u baahan tahay dheecaan wanaagsan. Wuxuu jecel yahay inuu qubaysto.
Haddii aanad transplanting sabab u tahay jirro, ka dibna dooro dherir laba mitir oo ka weyn sidii hore.